Mya Than Tint – Min Thayt
Tag: Mya Than Tint
Min Thayt January 14, 2020 August 14, 2020
Mya Than Tint (See the Moon) Mya Than Tint (Don't intervene to drink the horse) Dagon Taryar (Ohway Magaznie's Editor Ko Aung San) Ju (Mya's Moon) Pe Myint (Stanley Morison)...
Articles Audio Books Literature Uncategorized
“သိတဲ့အတိုင်း၊ စာရေးဆရာဆိုတာ ဘာအာမခံချက်မှ ရှိတဲ့ အလုပ် မဟုတ်ဘူး။ အဆင်မသင့်ရင် ငတ်နိုင်တယ်။ ဆင်းရဲနိုင်တယ်။ ဘဝပျက်သွားနိုင်တယ်။ စာရေးဆရာအဖြစ် အောင်မြင်ဦးမှ၊ အောင်မြင်ရင်လည်း ဒီအောင်မြင်မှုကို အရှည်တည်အောင် ထိန်းတတ်ဦးမှ တော်ကာကျတယ်။ ဘာမှ မသေချာဘူး။ ဒီတော့ ဖောင်ဖျက်ပြီး ကူးရဲအောင် သတ္တိတော့ မွေးရတယ်။” ျမသန္းတင့္ ေျပာၾကားခ်က္.... Audio ကျနော်တို့ မိတ်ဆွေတွေ စုပြီးတော့၊...
စာညွှန်း / ဇော်ဂျီ၊ ကျွန်တော်နှင့် သီရိပစ္စယာအလွမ်း ၊ မြသန်းတင့် စာအုပ္အညႊန္း Audio Book ဆရာမြနှင့် ပတ်သက်လျှင် သူ့၏ ဘာသာပြန်ချက်များသာ အဖတ်ရများသည်။ ဆရာမြတွင် ပင်ကိုယ်ရေး ဝတ္ထု အချို့ရှိပါသည်။ မဟာဂန္တဝင် ဘာသာပြန်ချက်များလည်း အများအပြား ရှိပါသည်။ နိုင်ငံတကာ ဘာသာပြန် သတင်းဆောင်းပါးများလည်း ဖတ်ရသည်။ ဆရာမြနှင့် ပတ်သက်လျှင် စာပေါင်းစုံအထွေထွေကို...